Ukwesaba ukubonakala sibuthakathaka, sivame ukuzifihla usizi lwethu. Asifuni futhi azi ukuthi singadabuka kanjani. Kodwa yilezi zindlela ezingasisiza siqonde ukuthi yini okusilimazayo nalokho esikudingayo ukuze siqhubekele phambili ekuphileni. Kuzo zonke imizwelo yethu, ukudabuka kunzima kakhulu ukuchaza: akuyona ubuhlungu obukhulu, hhayi ukuqhuma kwentukuthelo kanye nokuhlaselwa kwesibindi, okulula ukubona.
Lona umuzwa obuhlungu, owathi ngoFrançoise Sagan, "njalo uhlukanisa nabanye abantu." Iningi lethu libi nakakhulu kunokudabukisayo, isibonelo, ukuhlukunyezwa. Yiba nomdlandla ngomqondo othi "ohloniphekile kakhulu" kunokudabukisayo, khumbula uHarlequin noPierrot. Usizi luvame ukuhlotshaniswa nokungabi namandla, ubuthakathaka, abuvunyelwe umphakathi wanamuhla futhi, kubonakala sengathi kukuvimbela ukuba uphumelele, kudingekile, futhi ujabule. Uma sidabukile, sifuna ubumfihlo nokuthula, kunzima ngathi ukuxhumana. Usizi lubeka inkambo ekhethekile yemicabango futhi, njengoba uBenedikt Spinoza ephawula ngekhulu le-17, "buthaka amandla ethu okusebenza." Ngezikhathi ezinjalo, ukuphila okusebenzayo kuyama, ngaphambi kwethu kubonakala sengathi ikhethini liyancishiswa futhi isethulo asisaboniswa. Futhi akukho okushiywe kodwa ukuphendukela kuwe - ukuqala ukubonisa. Ukusuka ohlangothini lomuntu ubonakala egula, futhi welulekwa ukuba enze okuthile ngokuphuthumayo. Kodwa ingabe kuyadingeka ukuba usheshe uphindele emanzini okuphila? Usizi lunomuzwa ohlakaniphe kakhulu, futhi sikucela ukuba ufunde isihloko sethu.
"Kuyadabukisa ukuthi ubuhlobo bami nomuntu omuhle buye buthaka"; "Kuyadabukisa ukuthi okungcono kakhulu ukuhamba kuqala" ... Uma sidabukile, kukhona okuhle okuye kwashabalala empilweni yethu noma kungabonakali kuyo. Kungenzeka singakakwazi ukuthi kuyini, kodwa ngenxa yokudabuka, sizibuza lo mbuzo: yini esingenayo yokuphelela kokuphila, ngenjabulo? Sizilalela, silalelisise ubuhlobo bethu nezwe. Ngezinye izikhathi lo mzwa uxubene nentukuthelo, ukunganeliseki, intukuthelo yinto yokudlela "yesimo esibi". Kodwa kaningi siphuza isiphuzo esihlanzekile sokudabuka, okungasaphazamisa kuphela ukuqonda kokungalungi kwalo - khona-ke ukunambitheka kwayo kuba nzima, kuyisimo esibucayi, buhlungu. Ngokudabuka ngaphandle kwecala, inqwaba enhle yomfudlana obabayo ubonakala ... kuhlangene nobumnandi. Ngakho kunjalo. Zingaki izinkondlo ezinhle ezilotshwe kulesi simiso nokuthi yimuphi umculo! Kodwa ngezinye izikhathi impilo iyenzeka, inonya futhi isusa kithi othandekayo, eyigugu kakhulu ... Singagcina futhi siyeke ukuzwa ukuze singalokothi sikhohlwe ngephutha ngalokho esikulahlekile, ngoba kungenabuhlungu. Futhi-ke sizokhetha indlela yokucindezeleka. Futhi singakwazi ukuvula inhliziyo futhi siphile ukulahleka kwethu - yonke into, ukwehla: nokuzihawukela, nentukuthelo yesidalwa esishiywe futhi esishiywe, nesizungu, ngoba kungabikho muntu osizilayo ongasiza. Lena akuyona indlela elula yokuphulukisa. Kubalulekile ukwenza isinqumo, esethu, ngokujulile, ukuze sizithobe ngokuzithoba. Lokhu kudinga ukubekezela, kanye nenkululeko yokuzivumela ukukhala, ukugeza nokuhlanza isilonda. Ngaphezu kwalokho, kuzodingeka sahlukane nomqondo wecala: lapho, lapho sesizithethelele, sizokwazi ukukhala, sizozwa ukuthi umphefumulo olimale ugozwe ngengubo efudumele - kuyabangela ubuhlungu, kodwa ... kuyashisa.
Ukudabuka, kubalulekile ukulila ngokudabukisayo, ngokucophelela, ngobumnene. Umphefumulo okhalayo kufanele uhlelwe ngumuntu - kungani ungakwenzela umphefumulo wakho? I-tea ye-Brew, thatha indwangu ngendwangu futhi unesihlungu njengokuthanda komphefumulo wakhe. Futhi kuyamangaza ukuthi maduzane konke kuguquka kusuka kulowo muntu obambelela kuye. Manje ngokumomotheka, kuvela, khumbula ukulahlekelwa kwakho. Ungakwazi kakade ukukhuluma ngakho, buka izithombe. Ubudlelwane buba ngcono kakhulu, ngenxa yazo zonke kungenasisekelo. Manje awukwazi nje ukukhumbula, kepha ukuqhuba inkhulumomphendvulwano, uzwe ukusekelwa kwalowo owashiya ukudlula. Futhi lokhu kuhlakanipha okujulile kuvusa isifiso esinamandla sokuphila, ukuthi yonke intukuthelo yokuphila iyancibilika. Kuvela ukuthi akakwazi futhi akafuni ukususa noma yini esasilangazelela ukuyithanda. Bonke abathandekayo baphakade nathi. "
Futhi uma kungukucindezeleka?
Ukuntuleka kwezifiso, umuzwa wokungabi nalutho wangaphakathi futhi ungenalutho, ukukhathala okukhulu, ukungalali, imicabango yokuzibulala ... Ngokuvamile, ukucindezeleka kuvela njengendlela yokusabela empilweni embi kakhulu isikhathi eside noma njengempendulo engokomzwelo ebuhlungu obukhulu umuntu angakwazi ukubhekana nawo. Kodwa nokho isimo esiyinhloko sokucindezeleka ukuziyeka futhi ungazivumeli ukuba udabuke ngalokho okwenzekayo. Namuhla, abantu abaningi baseYurophu banqaba ukuthatha izidakamizwa zokucindezeleka, ukuze bangaboni ukucindezeleka, kepha bangazizwa kanjani imibuzo yakhe. Ngithanda impilo yami? Kungani ngikhuthazelela isimo sengqondo esinjalo isikhathi eside? Kungani ngihlala uma ngilahlekelwa labo engangibathandayo? Ikhono lokuzwa ukudabuka, ukuphelelwa ithemba, ukuzethemba kungasho ukuthi singabantu abaphilayo. Ngokuphambene nakho konke.
Ubani ongokwengqondo womndeni?
Ingabe ukuphinga kusebenza emsebenzini?
Kuthiwani uma inkosikazi yomyeni wami yazijwayele?
Umama nendodakazi: psychology of ubudlelwano
Aloe, izakhi zokwelapha, isicelo
Ubulili obuhle: ubulili nokudla
Indlela yokunakekela isembatho somboya
Amakhukhi we-oatmeal ngekhofi nele tshokolethi
Yini okudingeka yenziwe ngenkathi umndeni ungenabantwana?
I-Pesto sauce kusuka ku-beet ebhakabhaka